Osoma aadaa keenya addunyaan wal beeksifnuu ummata keenya biyya keessatti mootummuma kana jalatti dhumaa jirus yaadachuun dirqama – Kichuu
HomePhoto GalleryOsoma aadaa keenya addunyaan wal beeksifnuu ummata keenya biyya keessatti mootummuma kana jalatti dhumaa jirus yaadachuun dirqama
Osoma aadaa keenya addunyaan wal beeksifnuu ummata keenya biyya keessatti mootummuma kana jalatti dhumaa jirus yaadachuun dirqama
Osoma aadaa keenya addunyaan wal beeksifnuu ummata keenya biyya keessatti mootummuma kana jalatti dhumaa jirus yaadachuun dirqama. Dhimma gaddisiisaa Cinaaksanii fi bakkoota birootiin qabamuun keenya akkuma jirutti tahee tarkaanfiilee akka suuraa kana irratti mul’atanii dinqisiifachuu diduun rakkisaa dha.
Gaafan Asmara ture intala warra Rwanda tokkon beeka ture. Champal jedhamti Waajjira UNMEE Asmaraa keessa dalagdi ture. Warra Tutsii ti. Bifaanis namuma keenya fakkaatti. Finfinnees deddeebi’uu turte. Sammuun ishii qorannoof banaa ture. Waan amma Dr. Abiyyi godhe kana yeroon argu isheen yaadadhe. Dhimma firooma Oromoo fi Tutsii waliin haasawaa turre. Akkuma Oromootti loon aadaa isaanii keessatti bakka guddaa akka qaban yeroo duraaf ishii irraan dhagahe. Akka firooma Oromoo qaban himatti. Finfinnee yeroo turte aadaa Oromoo qorachuuf yaalii gootee sababa mootummaan hin deeggarreef carraa baadiyyaa keessa deemtee nama keenya dubbisuu dhorkamuu naa himte.
Amma Champal yoo waan kana argite hiree qorannoo gaafas dhorkamte san amma kabaja fi deeggarsa guddaadhaan argachuu dandeessi jedheen yaada. Dubbiin firooma Oromoo Itoophiyaan ala jiran barbaaduu fi jabeessuu kun jabaatee itti fufuu qaba jedheen abdadha. Firoonni keenya itoophiyaan ala hedduu dha. Garuu lubbuu Oromoo biyya keessatti karaa malee dabraa jiru baraaruu fi diinota keenya biyya keessaa of duraa buqqisuuf dursi kennamuu waliin tahuu qaba.